अस्पतालको बेड तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने स्थिति आयो : स्वास्थ्य मन्त्रालय – Health Post Nepal
अस्पतालको बेड तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने स्थिति आयो : स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७७ साउन २३ गते १७:४२
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालको बेड, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने स्थिति आएको जनाएको छ। नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले काठमाडौं तथा धर्नाबस्तीमा भएको ठाउँमा संक्रमणको दर बढ्दै गएकोले सो संकेत गरेको बताए।
‘संक्रमण बढ्दै गएमा अस्पतालले तथा स्वास्थ्यकर्मीले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, उनले भने,‘ संक्रमितको अकालमै ज्यान जान सक्छ ।’
डा. गौतमले सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनको लागि आग्रह गरे। ‘अत्यावश्यक नपरी घरबाट बाहिर नस्किने, २ मिटरको दुरी कायम राख्ने, अनिवार्य रुपमा माक्स लगाउने, साबुन–पानीले हात धुने बानीको विकास गर्यौ, डा. गौतमले भने ।’
मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक, निजि अफिसमा गोष्ठी, बैठक, सेमिनार तथा भेटघाट तुरुन्तै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएको छ, डा. गौतमले भने,‘ अस्पतालले कर्मचारीलाई सिफ्टमा काम गर्न वातावरण मिलाउनु।’ र चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपाउन आग्रह गरे।
स्वाब संकलन गरेपछि रिर्पोट नआएसम्म अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनले बताए।